January 13, 2018 January 13, 2018 Aagan Post0Comments
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मध्य रातमा सहमति भएको छ l स्वास्थ्य र बिशेष गरि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको सुधारको लागि डा. के.सी को यो चौधौँपटक अनशन थियो l करिब ४ घण्टाको वार्ता पछि केसी र स्वास्थ्यमन्त्री बोहराबीच पाँच बुदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् l
केसी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको पुनर्वहाली र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामालगायतका माग राखी अनसन बसेका थिए l सहमतिसँगै केसीले शनिबार १० बजे अनशन तोड्ने स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले बताए ।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारले सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिनमा प्रा.डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई निरन्तरता दिइनेछ ।
यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति :
← छक्का पञ्जा सन्देशमूलक व्यवसायिक चलचित्र
घरमै बसेर C-ASBA प्रणाली मार्फत शेयर आबेदन दिन यसो गर्नुहोस.. →